I-COVID-19 Physical Distancing - Sparky Express Roadside Assistance
I-COVID-19 Inqubomgomo Yokuqothula Umzimba
Sihlala Siqhelelene Njalo!
Njengoba sihlinzeka ngezinsizakalo zethu zosizo lomgwaqo kumakhasimende ethu abalulekile, sibheka ngokuqinile izinkombandlela ze-COVID-19 Physical Distancing Guidelines ezibekwe iDolobha laseToronto, nabanye omasipala basendaweni engaphakathi kweToronto GTA, kanye neSifundazwe sase-Ontario. Nakhu ukuthi:
Bonke abasebenzi bethu bazokucela ngomusa ukuthi ugcine kude ngamamitha ama-2 lapho sinikeza noma yini yethu izinsizakalo zosizo lomgwaqo.
Sizohlala sigqoka isifihla-buso sobuso noma isembozo sobuso nomakhenikha noma amagilavu ​​e-vinyl / lates lapho sisebenza emotweni yakho. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi kwezinye izimo, umsebenzi wethu udinga ukuthi sithinte ngokomzimba indawo ngaphandle kwamagilavu ​​(ngokwesibonelo, lapho sikhona ukuhlola isondo ukuthi alivuzi yini, empeleni sidinga ukuzwa ukuvuza komoya noma kwe-nitrogen esikhunjeni kuphuma kusondo - yingakho empeleni sidinga ukuthinta isondo lakho ngaphandle kwamagilavu ​​- ngakho-ke siyazi lapho kulungiswa khona isondo lapho kudingeka khona).
Ngeke singene kunoma iyiphi imoto ngaphandle uma kudingeka ngempela, kodwa uma singena, ukumboza ubuso namagilavu ​​kuzogqokwa ngabasebenzi bethu.
Uma thina vula izimoto, singathinta iwindi lemoto yakho, isibambo somnyango, njll. Uma kunjalo, sizosula noma yikuphi okuvelile esikuthinta ngendwangu nesibulali-magciwane.
Kwezinye izimo (ukuguqulwa kwesondo lonyaka), uma kucelwa amakhasimende ethu, sizongena egalaji ukuhambisa amasondo akho, noma kunjalo, sincoma ngokuqinile ukuthi ukhiphe amathayi akho emgwaqeni ngaphambi kokufika kwethu, ukusigwema ukungena egalaji lakho . Ngemininingwane engaphezulu ngenqubo yethu yonyaka yokushintsha isondo, sicela uvakashele leli khasi.
Asisoze sahambela noma yiziphi izingcingo zensiza uma kusolwa izimpawu ze-COVID-19.
Encwadini efanayo, sicela ngomusa amakhasimende ethu ukuthi angaceli eyethu amasevisi uma zikhombisa noma yiziphi izimpawu zegciwane le-corona.
Singashaya kuphela i-COVID-19 ndawonye ...